Vanhu Vakachenjera Ndivo Vakanyora Bhaibheri Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Urhobo Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Bhaibheri iro rinozivikanwawo seMagwaro Matsvene, rine mashoko akawanda anopa uchenjeri. Cherechedza uone kuti Bhaibheri pacharo rinozvirondedzera sei: “ Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” (2 Timoti 3:16) Pane umboo hwakawanda hunotsigira izvozvo. Chimbofunga zvinotevera:
Hapana akambobudirira pakupikisa Bhaibheri nezvekururama kwaro parinotaura nyaya dzakaitika kare.
Vanhu vakanyora Bhaibheri vaiva vakavimbika uye hapana chavaisiya. Kuvimbika ikoko kwakaita kuti chokwadi chibudiswe pachena.
Bhaibheri rine dingindira rimwe chete: kutsigira kuti Mwari ane kodzero yokutonga vanhu uye kuzadziswa kwechinangwa chake pachishandiswa Umambo hwake hwokudenga.
Kare kare pane dzimwe nyaya dzesayenzi idzo vanhu vakawanda vaibvumirana nezvadzo nepo vakanga vakarasika. Asi Bhaibheri paraitaura nyaya idzodzo rakanga rakarurama pasinei nokuti rakanga ranyorwa kare-kare.
Nhoroondo dzakanyorwa dzinoratidza kuti uprofita hweBhaibheri kana kuti zvarinotaura ndezvechokwadi.
Tingava sei nechokwadi chokuti mashoko ari muBhaibheri ndeechokwadi?
Nyanzvi Dzakadzidza Dzinobvuma Here Kuti Jesu Akamborarama?